Ntaneti Online Canton 127 | TheOne
Fairlọ ahịa Canton Fair nke 127th
Ebe ngosi 50 dị na ntanetị nwere ọrụ awa 24, 10 × 24 onye na-egosi ụlọ mgbasa ozi na-anọkarị, 105 ebe a na-agafe agafe e-commerce na njikọta ọnụọgụ e-commerce 6 na-emekọ ihe n'otu oge…n, June, na akara akara mmalite nke ihe omume ntanetị nke mebiri oke nke oge na ohere.
Nke a bụ nzukọ nke ntụkwasị obi. Mmetụta COVID-19 na akụnụba ụwa na azụmaahịa na-apụta ìhè. “Igwe ojii” Canton Fair meghere, na-enye ụzọ maka mmekọrịta akụ na ụba na azụmahịa maka ndị na-azụ ahịa ụwa. Ọtụtụ puku puku ndị China na ndị si mba ọzọ na-achọ ohere azụmahịa na mmepe, ntụkwasị obi ka ukwuu.
Nke a bụ ogbako ihe ọhụụ. ”Cloud” Canton Fair na-ewere teknụzụ ọhụụ dị ka ohere maka ụdị ọhụụ na ụdị azụmahịa ọhụụ dịka mkparịta ụka n'ịntanetị, ihe ngosi n'ịntanetị, nnyefe ndụ na e-commerce e-commerce. Ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ngwaahịa mbụ zuru ụwa ọnụ weputara, ma na imeputa ndi China na mmeputara ndi China si n’ụwa ebe a.
Maka anyị, nke a abụghị naanị ihe ịma aka, ọbụnadị ohere, anyị na-ewuli mgbasa ozi nke anyị
Canton Fair a abụghị naanị ihe ịma aka kamakwa, ọ bụụrụ anyị ohere. Site na nduzi na ntuzi aka nke azụmahịa azụmaahịa Tianjin, anyị mere nke ọma ibido ọrụ ntanetị nke ụlọ ọrụ ihe ngosi Cloud na ọnwa abụọ, mụta ma nyochaa onwe anyị, guzobe usoro mgbasa ozi na-ebi ndụ, ma kwadebe "props" dị iche iche maka mgbasa ozi dị ndụ site na ịzụrụ. nke ngwa mgbasa ozi na-ebi ndụ: ịkwadebe nke ịlele, nkwakọ ngwaahịa, na ngwaọrụ, edemede iji gbanwee ugboro ugboro, na njedebe nke esemokwu nke omume ndụ, ka ndị otu anyị niile nweta mgbanwe ọhụrụ, na mmepe nke ọha, ụdị ọhụrụ Mgbasa ozi n'ahịa ụgbọ ala nwere ikwe ka onye ọ bụla na-ere ahịa nwere mgbanwe ọhụụ, mana ka anyị mụrụ anya, chọọ ime nke ọma, ka ịhazigharị na usoro mmekọrịta mmadụ na ibe ya ga-amụ mgbe niile, ma gbanwee onwe gị.
Fivebọchị ise anyị bie egwuregwu iri na abụọ, natara ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ajụjụ iri abụọ maka ndị ahịa a bụ mbọ niile anyị na-agbakọ, kwenyekwa na ụbọchị ise anyị ga-arụpụta nsonaazụ ka mma, n'otu oge, ekele maka ndị ahịa ọhụrụ na ndị agadi na-akwado, anyị ga-aga n'ihu na -aga akwụkwọ, ngwaahịa kacha mma, ọnụahịa kacha mma na ọrụ kacha mma gị, daalụ ọzọ
Oge nzipu ozi: Jun-19-2020